Ciidamo dheeraad ah oo ka socda dalka Maraykanka ayaa gaaray magaalada Muqdisho | SAHAN ONLINE
Ciidamo dheeraad ah oo ka socda dalka Maraykanka ayaa gaaray magaalada Muqdisho
MUQDISHO – Ciidamo ka socda dalka Maraykanka ayaa gaaray magaalada Muqdisho kuwaasoo tababar siin doona isla markaana qalabeyn doona ciidamada Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ee ka howlgala koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya.
Ciidamadan ayaa 2-dii bishan gaaray magaalada Muqdisho ,waxaana saraakiishu sheegayaan in tegista ciidankan ay codsatay dowladda Federaalka ee Soomaaliya ,iyagoona ku biiraya kuwa kale oo horay u joogay dalka.
Afhayeenka U.S.Africa Cimmand Pat Barnes ayaa sheegay in ciidankan ay fulin doonaan howlgalo ciidan iyo wadashaqeyn dhinacyada kala duwan ah inta ay joogaan Soomaaliya si loo caawiyo Isbaheysiga iyo saaxiibada.
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa bishii hore awood dheeraad ah siiyay ciidamada Maraykanka ee bariga Afrika ka howlgala ,wuxuuna koonfurta ku sheegay aag dagaal.
Ciidamadan ayaa noqonaya kuwii ugu badnaa ee Maraykanku usoo diro Soomaaliya tan iyo 1994tii magaalada Muqdisho xili magaalada lagaga dilay 18-askari.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa 12-kii bishaan sheegay in dowladiisu laba sano gudahood kusoo afjarayso dagaalka ay kula jirto Al-Shabaab.